I-Seychelles iya kwidijithali kwinqanaba leendaba lase-Italiya kunye namaphulo ekujoliswe kuwo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles iya kwidijithali kwinqanaba leendaba lase-Italiya kunye namaphulo ekujoliswe kuwo
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
I-ofisi yabameli boKhenketho baseSeychelles e-Itali kunye neqabane lezentengiso iQatar Airways isungule imikhankaso yabathengi yokufaka kumacandelo amabini abaluleke kakhulu kwaye akhulayo endawo esiya kuyo - iholideyokugqibela kunye ne-ecotourism.
I-Seychelles ikwindawo ephambili yomtshato wase-Italiya iMatrimonio.com.
I-portal inama-700,000 + abathengisi, i-20 yezigidi zabasebenzisi ezizodwa kunye ne-7 yezigidi zokuphononongwa.
Ikwayinkokeli kumajelo eendaba ezentlalo ngaphezulu kwe-8,100,000 yabalandeli kuFacebook, ngaphezulu kwabalandeli abangama-3,950,000 kwi-Instagram kunye nabalandeli abangama-2,000,000 XNUMX XNUMX ePinterest kwaye okokuqala kwiziphumo zokuThengisa iiNjini zokuKhangela kunye neziphumo zeNjini yokukhangela.
Ukujolisa kwizibini ezitshatayo kwisizini yomtshato elandelayo, emva kokususwa kwesibhengezo semitshato ngoJuni ophelileyo ngowama-2021 ngurhulumente wase-Italiya, iSeychelles kukuqaqanjelwa kwesango eliphezulu lase-Italiya iMatrimonio.com.
Inkokheli yehlabathi ekucwangciseni umtshato kwi-Intanethi ngesabelo se-96% semitshato ye-195,000 ebanjwa minyaka le e-Itali kwaye isebenza kwiimarike ezili-12 kwihlabathi liphela, le portal yomtshato yeyona nto ibalulekileyo ekubhekiseni kuyo izibini eziququzelela umtshato wazo kwaye zibonisa konke ukukhangela okunxulumene nomtshato, okunje njengezambatho, iindawo zokuhlala, iintyatyambo kunye neendawo zekhefu lomtshato. Umsebenzi wabo ubandakanya ukunceda abantu abatshatileyo ukuba bacwangcise umtshato wabo ngokubaqhagamshela kunye nababoneleli abaphezulu kwindawo yabo.
I-portal inama-700,000 + abathengisi, i-20 yezigidi zabasebenzisi ezizodwa kunye ne-7 yezigidi zokuphononongwa. Ikwayinkokeli kumajelo eendaba ezentlalo ngaphezulu kwe-8,100,000 yabalandeli kuFacebook, ngaphezulu kwabalandeli abangama-3,950,000 kwi-Instagram kunye nabalandeli abangama-2,000,000 XNUMX XNUMX ePinterest kwaye okokuqala kwiziphumo zokuThengisa iiNjini zokuKhangela kunye neziphumo zeNjini yokukhangela.
Iprojekthi, kwintengiso kunye neQatar Airways, ibandakanya imikhankaso emibini yokunyanzela, ngokusebenzisa idesktop kunye nomboniso oshukumayo, ubhengezo kunye nolindelo kumajelo asekuhlaleni, ukukhuthaza izibini ukuba zicwangcise Iholideyokutshata yaseSeychelles neephakheji zeholide. Ukuqala ngoJuni ka-2021, eli phulo lixhotyisiwe linqanaba lesibini lomkhankaso wokukhangela kunye nokubuyisela umva, kunye nephepha leendaba elikhethekileyo kwiziko ledatha lonke labakhwenyana kunye nabakhwetha abali-190,000.
Seychelles yoKhenketho Uqinisekile ukuba eli phulo liza kukhuthaza icandelo le-honeymoon, ebelilele ngenxa yobhubhane we-COVID-19 ukusukela kunyaka ophelileyo ukuba i-Seychelles yeyona ndlela ibalekayo kwizibini ezifuna ukhuseleko, ukusondelelana kunye neparadesi engafumanekiyo.
Ngapha koko, ukhenketho lwaseSeychelles lubetha kwelinye icandelo elibaluleke kakhulu elikhula ngesantya esikhawulezayo- ukhenketho lwezendalo.
Injongo yayo kukukhuthaza umhambi omtsha, onomdla kwimicimbi yozinzo kunye nokukhangela iindawo ezintle nezinyani ezinje ngeSeychelles, ngemimangaliso yendalo kunye nokuqwalaselwa kolondolozo, iSeychelles izakuboniswa kwiinyanga ezizayo kwindalo eyaziwayo yase-Itali. Iphephancwadi iLa Rivista della Natura kunye namajelo eendaba akwi-intanethi nakwezentlalo.
UNatura, upapasho lwekota, oqhayisa ngabafundi abayi-20,000 1999, kunye nokuqina okukhoyo kwi-intanethi kunye newebhusayithi yayo esemthethweni kunye namajelo eendaba ezentlalo abeyinkokeli kwindalo nakwimixholo yendalo ukusukela ngo-XNUMX. Yaziwa ngemifanekiso ekumgangatho ophezulu kunye nomxholo onomdla, opapashiweyo. amanqaku ambalwa kuhlelo ngalunye lwekota asayinwa ziingcali eziphambili kwimicimbi yendalo kunye nokusingqongileyo. I-Rivista della Natura ikwasasazwa ngexesha leminyhadala kunye nemiboniso yorhwebo. Ushicilelo ngalunye lubonisa iindlela zokuhamba ngendalo kunye nohambo oluya kwiindawo zesizwe nezamazwe aphesheya kugxilwe ngakumbi kuhambo oluzinzileyo, iindawo zasendle, izilwanyana kunye nezityalo.
Ushicilelo ngalunye lubonisa into ethi "UQOQOSHO" - egubungela imiba efana nokuziphatha, iimarike, uhambo oluzinzileyo- olunikezelwe kubudlelwane phakathi komntu nendalo esingqongileyo, ngelixa amanye amacandelo egxila kwiingcebiso malunga nokuziphatha kubomi bemihla ngemihla kunye neendlela ezilungileyo zabafundi abanokuzibandakanya nazo gcina umhlaba kungcoliseko, ngelixa amaqonga ayo akwi-Intanethi ehambisa iincwadana ezinomdla kunye nomxholo okhethekileyo.
Umkhankaso wabathengi ubandakanya amanqaku anikezelwe eSeychelles, amaphepha entengiso, iincwadana ezixhaswayo kunye neebhanile ezikhethekileyo zewebhusayithi ezijongwa ngabasebenzisi abayi-1,712,360 ngonyaka.
Kwi-2019, iSeychelles yafumana iindwendwe ezingama-27,289 ezivela e-Itali.